Factory Lanyard namboarina - Mpanamboatra sy mpamatsy Lanyard namboarina
Tsy mitovy amin'ny lanyard nentim-paharazana, ny lanyard namboarina dia mahasarika maso kokoa. Ny lanyard dia azo namokarana nisy vokany mamirapiratra, nanampy rhinestones, na nanampy litera nirohotra. Ireo lanyard ireo dia azo ampiasaina amin'ny fotoana manokana. Ohatra, ny fiatraikany mamirapiratra dia mahatonga ny lanyard hita amin'ny maizina, izay be mpampiasa amin'ny alina mandeha, club club sns. Aza matahotra ianao fa tsy hita ambanin'ny alina ny sary famantarana. Ny sary famantarana dia hisongadina kokoa amin'ny maizina. Ny fanampiana rhinestones na tarehintsoratra marobe dia mahatonga ny lanyard ho lamaody bebe kokoa. Ny Rhinestones dia somary mamiratra ambanin'ny tara-masoandro, aleon'ny tovovavy noho ireo lanyard ireo. Ny lanyard dia amidy mafana eo ambanin'ireo singa lamaody ireo. Aleon'ireo tanora ireo lanyard ireo ary io no lasa mariky ny lamaody. Ny logo dia azo apetraka amin'ny fomba maro toy ny fanontana silkscreen, famindrana hafanana, tenona sns. Mety ho very hevitra ianao amin'ny fizotrany ampiasaina amin'ny lanyard namboarina. Avelao aminay ireo fanontaniana ireo, ny ekipanay mivarotra matihanina dia hanome ny soso-kevitra mety, tsy vitan'ny hoe mampiavaka ny logo ihany, fa koa mifaninana amin'ny vidiny. Atsaharo ny fisalasalana ary mifandraisa anay indray mandeha. Jian dia ho mpamatsy anao maharitra sy azo itokisana.
Lanyard misy taratra